WAR CUSUB: Tababaraha Chelsea ee Frank Lampard oo doonaya inuu noqdo Macallinka Kooxda Barcelona – Gool FM
(Madrid) 07 Jan 2021. Macallinka Kooxda Chelsea ee Frank Lampard ayaa indhaha ku haya inuu noqdo tababaraha kooxda Barcelona mustaqbalka fog, sida uu Warinayo Suxufiga kubadda cagta Spain ee Guillem Balague.
Lampard ayaa xirfaddiisa tababarenimo ka soo bilaabay kooxda Derby County ka hor inta uusan Macallin u noqon Chelsea, xiddigii hore ee xulka qaranka England ayaana Blues ku hoggaamiyey afarta sare ee horyaalka Premier League xilli ciyaareedkii la soo dhaafay.
42-sano jirkaan ayaa haatan xaalad adag ku maraya garoonka Stamford Bridge, iyadoo natiijooyin liita oo uu keenay ay soo jeediyeen in laga qaadi karo waajibaadkiisa tababaranimo ee kooxda Chelsea.
Sida uu warinayo Suxufiga Balague, kaddib markii seegay inuu matalo sida Barca iyo Real Madrid ciyaaryahan ahaan, Lampard ayaa doonaya inuu maamule ka noqdo horyaalka La Liga, waxaana uu isha ku hayaa booska ugu sarreeya ee garoonka Camp Nou.
“Riyadiisu waa inuu tababare ka noqdo horyaalka La Liga oo uu sameeyo wixii uusan sameyn kari waayey maalmihii uu ciyaaryahanka ahaa. Waxa uu jeclaan lahaa inuu fariisto Nou Camp iyo inuu tababare u noqdo Barca mustaqbalka fog,” Balague ayaa u sheegay Esport3.
Macallin Lampard ayaa guuleystay 41 kulan, waxa uu barbaro galay 17 kulan, isagoo laga adkaaday 22 kulan 80 ciyaarood oo uu hoggaamiyey kooxda Blues.